Iraq: ISIS oo askar badan ku dishay magaalada Ramadi - Wargane News
Home Somali News Iraq: ISIS oo askar badan ku dishay magaalada Ramadi
Kooxda Daacish ayaa labadii maalmood ee lasoo dhaafay in ka badan 30 askarta dowlada Ciraaq ku dilay nawaaxiga magaalada Ramadi ee xarunta gobalka Anbar.
Salaasadii ayey ahayd markii gaari bambaano lasoo saaray ay ISIS la beegsatay ciidamada Dowlada ee ku sugan deegaanka Al-Bu Dhiaab oo kamid ah magaalada Ramadi, halkaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 18 askari oo goobtaasi ku sugnaa.
Arbacadii shalay ayey Daacish markale duqeyn madaafiic la beegsatay ciidamada ku sugan magaalada Ramadi, waxaana la sheegay in duqeymihii shalay ay ku dhinteen ugu yaraan 13 askari.
Bishii December ee sanadkii tagay ayey ciidamada dowlada sheegeen inay magaalada Ramadi ka saareen xoogaga ISIS oo halkaasi muddo sanad ah ka talinayey.
Ramadi ayaa ah xarunta gobalka Anbar oo ah gobalka ugu weyn dalka Ciraaq, waxaana qeybo badan oo kamid ah weli ka taliya kooxda Daacish.
Isla nawaaxiga magaalada Ramadi ayey weli ku sugan yihiin boqolaal ka tirsan xoogaga Daacish oo halkaasi laga saari waayey, magaalada Ramadi ayaa burbur xoogleh kasoo gaaray duqeynmaha ay la beegsadeen ciidamada dowlada Ciraaq oo gacan ka helayey diyaaradaha dagaalka ee Maraykanka.